Wararkii ugu dambeyay ee Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda %
By Ramzi Yare	 On Jun 13, 2019
Kooxaha Qaarada Yurub ayaa si weyn isagu diyaarinaya xilli ciyaareedka soo socda iyadoo durbaba ay isku dayayaan inay heshiisyo la gaaraan xiddigaha ay u baahan yihiin xagaagan.
Hadaba waxaan halkaan idiin kugu soo gudbineynaa wararkii ugu dambeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee ay qoreen wargeysyada Yurub.
Daafaca kooxda Chelsea Emerson Palmieri ayay lala xiriiriyay kooxda Juventus laakiin xiddiga Talyaaniga ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay Stamford Bridge. (Daily Star)
Manchesterr United ayaa ugu danbeyn soo gabagabeysay ceyrsashadeeda xiidiga reer Wales Gareth Bale, iyagoo go’aansaday inaysan u dhaqaaqin saxiixa xiddiga Real Madrid. (Evening Standard)
Wakiilka Matthijs de Ligt, Mino Raiola ayaa la kulmay agaasimaha PSG Antero Henrique iyagoo kawada hadlay saxiixa daafaca 19 jirka kooxda Ajax. Labada kooxood ee PSG iyo Ajax syaa ku dhow inay ku heshiiyaan 75 milyan euro. (RMC Sport)
Kooxda heysata horyaalka Faransiiska ee PSG ayaa u soo bandhigtay De Lig heshiis shan sannadood ah oo uu sannadkii ku qaadanayo 12 milyan euro. (ESPN)
Laakiin Raiola ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu u safray Faransiiska si uu heshiiska De Ligt ugala hadlo PSG. (Daily Express)
Chelsea ayaan heshiis joogta ah kula wareegi doonin xiddiga Real Madrid Mateo Kovacic, waxaana 25 jirkaan uu dib ugu laabanayaa kooxda Inter Milan, (Daily Mail)
Kooxda AC Milan ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca dhexe ee Liverpool Dejan Lovren oo 29 sanno jir ah. (Sky Sports)
Liverpool ayaa kaliya ogolaan doinfa in Lovren uu baxo haddi ay ugu yaraan ku helayaan 25 milyan ginni. (The Times)
Weeraryahanka Man United Romelu Lukaku oo 26 jir ah ayaa sheegay in tababaraha Inter Milan Antonio Conte inuu yahay tababaraha ugu fiican caalamka, islamarkaana Serie A uu yahay horyaal uu ku riyoodo inuu ka ciyaaro. (ESPN)
Manchester United ayaa ugu yaraan ku dooneysa xiddigeeda khadka dhexe Paul Pogba lacag gaareysa 150 milyan ginni. ( Daily Mirror)
Arsenal ayaa wadahadalo horumar leh ugu jirta saxiixa daafaca Faransiiska ee kooxda Saint-Etienne 18 jirka William Saliba. (Le10Sport)
Xiddiga u ciyaara kooxda Shiinaha ee Dalian Yifang 25 jirka reer Belgium Yannick Carrasco ayaa rajeynaya inuu xagaagan ku laabto Yurub xilli ay xiiseyneyso Arsenal. ( Daily Mail)
Madaxa kooxda Atletico Madrid Miguel Angel Marin ayaa xaqiijiyay in weeraryahanka reer France Antoine Griezmann oo 28 jir ah inuu u wareegayo Barcelona xagaagan. (Sport)
Manchester United ayaa dooneysa inay xilli danbe ka afduubato saxiixz Griezmann kooxda Barcelona iyagoo dalab 95 milyan ginni hordhigaya kooxda Atletico Madrid. (The Sun)
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa beeniyay inuu fasax hal sanno ah ka qaadanayo kubada cagta dhamaadka xilli ciyaareedka danbe. (Independent)
Liverpool ayaa dib u cusbooneysiisay xiisaheeda kubadsameeyaha kooxda Lyon Nabil Fekir laakiin ma bixin doonaan 53dii milyan ginni ee ay kula heshiiyeen kooxda Faransiiska xagaagii hore ka hor inta uusan burburin heshiiska 25 jirkaan. (Le Progres)
Agaasimaha isboortiga Juventus ayaa soo gaaray magaalada London si uu u soo gabagabeeyo heshiiska tababaraha Chelsea Maurizio Sarri. (Calciomercato)
Chelsea ayaa diidi doonta inay fasaxdo Sarri ilaa iyo kooxda Talyaaniga ay ka bixineyso lacagta magdhowga ah ee ay Blues dalbatay. (Daily Mail)
Rasmi:Todobaadka kowaad jadwalka kulamada horyaalka Premier League, todobadka ugu horeeya oo lasoo bandhigay
Hordhaca: Heegan Fc Vs Mogdisho City Club- Xidigaha Ka Maqan Labada Dhinac iyo Sheeko Walba Oo La Xiriirta